Ceejinta Alshabaab ee Buulo Barde oo culeys weyn dhalisay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ceejinta Alshabaab ee Buulo Barde oo culeys weyn dhalisay
15th June 2014 A warsame Af Soomaali 0
Buulo-barde – Mareeg.com: Degmada Buulo Barde oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, islamarkaana dhowr bilood ka hor ay Alshabaab ka saareen ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ka socda Jabuuti ayaa waxaa soo wajahay culeys dhaqaale, kadib markii Alshabaab ka xayireen ganacsiga.
Waxaan weli suuragal aheyn in degmadaas la gaarsiiyo badeecooyinka ganacsi, waxaana halkaas si dhuumaaleysi ah gaari dameerro ku gaarsiiyaan raashin.
Maamulka degmada Buulo Barde ee gobalka Hiiraan ayaa shaaciyay in xaalad adag oo dhanka nolosha ah ay ka jirto degmada Buulo Barde ee gobalka Hiiraan oo ay go’doomiyeen Al-Shabaab.
Guddoomiyaha degmada Buulo Barde, Axmed Cabdi Wehliye ayaa sheegay in xaalad aad u adag oo xagga nolosha ah ay ka jirto degmada, islamarkaana aysan jirin wax hay’ad ah oo ka howlgasha magaalada.
Guddoomiyaha, ayaa tilmaamay in dhanka magaalada Beladweyne iyo dhanka magaalada Muqdisho intaba aan loo safri karin oo ay go’doon tahay magaalada Buulo Barrde gabi ahaanba, isaga oo baaq qeylo dhaan ah udiray Hay’adaha Samafalka.
Guddoomiyiyaha ayaa xusay in jidadka soo gala degmada ay yihin kuwa xayiran, taasna ay keentay in uu saameyn kuyeesho magaalada oo ay dhacaan sicir barar, waxaana uu dowladda ka codsaday in kaalmo deg deg ah lala soo gaaro bulshada degmadaasi ku dhibaateysan, islamarkaana gacan lagu siiyo sidii ay u furi lahaayeen waddooyinka xiyiran.
Ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya ee ku sugan Buulo Barde ayaa adeegsada diyaarado si halkaas u gaarsiiyaan waxyaabaha ay u baahan yihiin.
Buulo Barde ayaa kamid ah Magaalooyinkii ugu dambeeyay ee ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay kala wareegeen Al-Shabaab.
Dagaallo ka dhacay Jaziirad ka tirsan Jubada Hoose
Madaxweyne Xasan oo waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay saiirka Canada